Duufaanta Maria ayaa gaartay heerkii ugu sareeyay waxayna halakeysay jasiiradda Dominica | Saadaasha Shabakadda
Xabad joojin la'aan. Xilligii duufaanta Atlantic ee sannadkan aad bay mashquul u tahay. Sidoo kale. Iyadoo aan loo baahnayn waqtiga lagama maarmaanka u ah in dib loo helo itaalka Irma kadib, hadda Maria waa halyeeyada. Kaliya maaha sababta oo ah inay si dhakhso leh u sii xoogaysanaysay (waxay ka gudubtay inay gaarto qaybta 1 illaa 5 wax ka yar 24 saacadood), laakiin sidoo kale waxay u hanjabaysaa inay u horseedi doonto burbur aad u badan sidii kii ka horreeyay.
Mar labaad, jasiiradaha Badda Kariibiyaanka ayaa ah isha duufaanta. Xaqiiqdii, hadda iyo markale, ficil ahaan dhammaan jasiiradaha Caribbean waxay heegan ugu jiraan Maria.
El Duufaanta Maria, oo wadata dabeylo joogto ah oo gaaraya 260km / saacaddii, ayaa ku dhufatay jasiiradda Dominica Isniintii, oo ay ku nool yihiin 75.000 oo qof, oo lumiyay wax walba, sida Ra'iisul Wasaare Roosevelt Skerrit uu ku sheegay kiisa Koontada Facebook. Erayadiisa, "waxaan luminay wax walba oo ay lacagtu iibsan karto oo bedeli karto."
Marka loo eego saadaasha, u gudbi doonaa Puerto Rico iyo British Virgin Islands, halka ay imaaneyso inta udhaxeysa habeenka Talaadada iyo Arbacada. Lama filayo inay soo gasho Mareykanka, sidii Irma ay gaartay.
Sawir - Xarunta Duufaanta Qaranka (CNH)
Kahor imaatinka Maria, mas'uuliyiinta waxay ka codsadeen dadka inay guryahooda joogaan, marka laga reebo kuwa ku nool meelaha nugul, oo ay tahay inay u guuraan meel aamin ah. Dalka Dominican Republic, waxaa amar lagu bixiyay in laga saaro ka hortag maalinta Isniinta, maadaama duufaanta la filayo inay dalka gaarto berri, Arbacada.
Jasiiradaha Virgin Islands iyo Puerto Rico labadaba waxay ka soo mareen Irma pass maalmo ka hor. Duufaan sababtay khasaaro maadiga ah oo aad u badan oo galaafatay nolosha 82 qof. Nasiib darrose, xoojinta duufaanta Maria sidoo kale aad ayey u sarreysaa. Laga bilaabo halkan, waxaan rabnaa dir geesinimo iyo xoog badan dhammaan kuwa jooga Kariibiyaanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Duufaanta Maria ayaa gaartay heerkii ugu sareeyay waxayna halakeysay jasiiradda Dominica